Ime ụlọ ikuku àgwà - Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd.
Eco-ekupụ Energy Recovery Ventilators
Eco-ebughibu Energy Recovery Ventilators
Eco-Nkasi Obi Energy Recovery Ventilators
Crossflow Okpomọkụ Exchangers
Cross Counterflow Okpomọkụ Exchangers
Rotary Okpomọkụ Exchangers
Okpomọkụ Pipe Okpomọkụ Exchangers
Liquid Circulation Okpomọkụ Exchangers
Ikpokọta Air njikwa Units
N'elu ụlọ Air njikwa Units
Kọmpat Air njikwa Units
Industrial Air njikwa Units
DX eriri igwe Air njikwa Units
Packaged Fresh Air njikwa Units
Ime ụlọ ikuku quality
Gịnị bụ Indoor Air Quality?
"Ime ụlọ ikuku quality," ma ọ bụ IAQ, bụ a dịtụ ọhụrụ isiokwu na gburugburu ebe obibi na nchekwa. Mgbe a otutu anya e mere n'èzí mmetọ na n'oge gara aga ole na ole ọtụtụ iri afọ, na-elekwasị anya na ime ụlọ ikuku àgwà a na-amalite amalite. Na àgwà nke a home ikuku tumadi nwere na-eme na ego nke pollutants n'ime, ma ọ na-kpebisie ike site iru mmiri na ventilashion etoju. The US Environmental Protection Agency hụrụ na kasịnụ nke pollutants nwere ike ịbụ ruo 100 ugboro elu n'ime ụlọ karịa n'èzí. The American Lung Association na-eme atụmatụ na ọtụtụ ndị na-eji 90% nke oge ha n'ime, otú ọcha ime ụlọ ikuku dị ezigbo mkpa.
Gịnị na-akpata ime ụlọ ikuku ndu?
Dị ka US Environmental Protection Agency, ihe n'ime home na hapụ gas bụ isi na-akpata ime ụlọ ikuku nsogbu. The ndepụta gụnyere carpeting, upholstered ngwá ụlọ, gas ngwa, akọwa na solvents, ihicha ngwaahịa, ikuku fresheners, akọrọ-kpochara uwe na ọgwụ ahụhụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-arụzi ụgbọala, uzu oku site na mmanụ ụgbọala, mmanụ na antifirizi na ala ụgbọ ala gị nwere ike ịchọta ụzọ ha n'ime ụlọ gị na ikuku. Aka ike ọgwụ nwekwara ike na-abịa site sịga ọkụ na woodstoves.
Ezughi oke ventilashion nwere ike njọ nsogbu n'ihi pollutants ina tọrọ atọ. Tightly akara na mma-gwara mmanụ obibi zere ọhụrụ n'èzí ikuku, nke nwere ike itughari na pollutants. High okpomọkụ ma na iru mmiri na-etoju nwere ike na-amụbakwa kasịnụ nke ụfọdụ pollutants.
Gịnị bụ ihe kasị mma ime ụlọ ikuku quality ngwaahịa?
Ọtụtụ teknụzụ dị taa na mbuso otu ma ọ bụ òtù abụọ nke ikuku contaminants. Holtop ọhụrụ ikuku ọcha usoro ERV e mere mbuso niile atọ maka mbara ikuku dị ọcha. Ọ nwere ike na ọ bụghị nanị na-eme ka dị ọcha ọhụrụ ikuku na ime ụlọ, inupụ si stale ikuku, ma belata ventilashion eri mgbe na-agba ọsọ ntụ oyi usoro.
Olee otú m maara nke ime ụlọ ikuku quality ngwaahịa bụ ezi na m?
Ị nwere ike ịkpọtụrụ Holtop sales otu chọta ndị kasị mma na ngwaahịa gị na ezinụlọ gị. Results dabeere na okwu ị mata dị ka nsogbu n'ụlọ gị. I nwere ike ịkpọtụrụ gị obodo HOLTOP dealer inwale n'ụlọ gị gị na ime ụlọ nkasi obi usoro.
Gịnị ka m pụrụ ime onwe m aka m n'ụlọ ikuku quality?
E nwere ọtụtụ kwa ụbọchị i nwere ike ime iji belata pollutants ekesa na n'ụlọ gị gị na ikuku, gụnyere:
Store ezinụlọ cleaners, agba solvents na chemical ngwaahịa na tightly akara containers. Ọ bụrụ na o kwere omume, na-ha n'èzí.
Ọcha na agụụ dịkarịa ala otu izu.
Mgbe nile asa bed linens na stuffed ụmụaka.
Nọgidenụ na windo emechi mgbe pollen, mmetọ na iru mmiri na ọkwa elu.
Gwa onye gị na obodo HOLTOP dealer inyocha na ọcha n'ụlọ gị gị na kpo oku na obi jụrụ usoro.
Jide n'aka gị n'ụlọ na-ọma ventilated. (Modern obibi na-ọma a gwara mmanụ ma kaa akara echekwa ike, nke pụtara airborne pollutants nwere ụzọ na-adịghị agbanahụ).
Nọgidenụ na iru mmiri na-etoju n'ime a ike, ala nso iji gbochie uto nke ebu na ebù (30% - 60%).
Zere iji esi ísì ụtọ deodorizers na isi-masking ikuku fresheners, nke nwere ike ime ka na-egbu egbu kemịkal.
Họrọ chọọ na emit kasị nta kwere omume ego nke chemical vapors.
Ekwela ka ise siga n'ime ụlọ gị na-eme ka n'aka na niile gas ngwa na-ekwesị ewesakarị.
Weta Forest-Fresh Air Gị Life!
Tọrọ ntọala na 2002, Holtop bụ na-eduga emeputa ke China ọkachamara na mmepụta nke ikuku ikuku okpomọkụ mgbake ngwá.
Adress: Mba 5 Yard, 7th Guanggu Street, Badaling Economic Development Mpaghara, Yanqing District, Beijing, China
ZIPỤ NCHỌPỤTA maka ọkachamara & eri-irè HVAC Ngwọta